Kunyangwe kana kwete iyo Apple Watch Series 6 iripo haisi nguva yakanaka yekutenga Series 5 | Ndinobva mac
Kunyangwe iyo Apple Watch Series 6 iripo kana kwete haisi nguva yakanaka yekutenga Series 5
Tiri kuve nemanheru ezvakanyanya kwazvo nerunyerekupe rwevamwe uye vamwe kunyeverwa kwezvinhu zvinogona kuitika izvo zvinouya maererano neApple zvigadzirwa. Parizvino panguva yechinyorwa chino hatina zvishandiso zvitsva zvinoonekwa uye hapana kana zuva rinogona kunge riine chirevo kubva kukambani yeCupertino, asi zvese uye nezano ratidziro yatinogona kukupa Kana iwe uri kufunga nezve kutenga itsva Apple Watch kana iPad, iwe unofanirwa kumirira.
Zvine musoro Izvo zvinoitika kana zviri pakati pezvirongwa zvako zvekutenga iPhone nyowani, nekuti iyo iPhone 12 iri padyo padyo nekuvhurwa uye izvi zvinogona kudzikisa mutengo wazvino mamodheru zvishoma, kwete zvakawanda, asi zvimwe zvinonakidza zvinogona kuoneka.
Zvinotaridza kuti Jon Prosser anogona kutaridzika zvakashata kana iyo Apple Watch nyowani uye iPad Mhepo zvisati zvazoburitswa sezvaakafanotaura kusvika maawa mashoma apfuura paakaundi yake yeTwitter, asi parizvino zvese zvinoratidza kuti tichazomirira kuvaona kusvika. Pane rimwe divi Maka Gurman, akatsanangurira vezvenhau kuti isu tichaona zuva reruzhinji rweiyo nyowani iPhone 12 uye ikozvino hazviratidzike.
Asi chinhu chakakosha ikozvino kuyambira vese avo vashandisi vane shungu dzekutenga Apple Watch nyowani uye vasingazive mamiriro azvino mushe, kutsanangura kuti zvakanakisa kumirira kudzamara modhi nyowani yatsvagirwa chinonakidza chinopihwa kana Iwe usiri kuda kutenga iyo nyowani modhi, asi mira nekuti izvi zvese zvinogona kugadziriswa mumaawa mashoma. Zano iri izvozvi ari kutsika-tsika kubva kuChitsauko 5 kutenga kuti uone zviri zvitsva muChikamu 6, kunyange hazvo isina kuzoburitswa nhasi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kunyangwe iyo Apple Watch Series 6 iripo kana kwete haisi nguva yakanaka yekutenga Series 5
Kubva kuApple Park: New Apple chiitiko munaGunyana 15
Tim Connolly ndiye wazvino kuwedzera kuApple TV +